အချိန်ပေးပြီးကြည့်ရတာတန်တယ်ဆိုတာ”Confession of Murder” ဇာတ်ကားကိုပြောတာ – Trend.com.mm
Posted on July 5, 2018 July 5, 2018 by Noel
Trend ပရိသတ်ကြီးအတွက် ဒီတစ်ခေါက်တော့ ကိုရီးယားဇာတ်ကားကောင်းလေးတစ်ကားနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။ဒီဇာတ်ကားဟာ၂၀၁၂ ခုနှစ်တည်းကထွက်ရှိခဲ့တာဖြစ်လို့ကြည့်ဖူးသူတွေလည်းရှိမှာပါ။မကြည့်ရသေးတဲ့ပရိသတ်တွေအတွက်တော့ ဒီဇာတ်ကားက အချိန်ပေးပြီးကြည့်ရတာ တန်တဲ့ဇာတ်ကားလေးပဲလို့ ပြောချင်ပါတယ်။ဇာတ်ကားလေးနာမည်ကတော့ “Confession of Murder” ပါ။အက်ရှင်စိတ္တဇဇာတ်လမ်းပုံစံဖြစ်ပြီး ဒါရိုက်တာ Jung Byung-gil ရိုက်ကူးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားသူတွေကတော့ မင်းသားချောတွေဖြစ်ကြတဲ့
Jung Jae-young နဲ့ Park Si-hoo ပါ။
ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းကိုပြောပြရမယ်ဆိုရင်တော့…မိန်းကလေးတွေချည်းပဲရက်ရက်စက်စက်သတ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့ စိတ္တဇလူသတ်သမားကိုဖမ်းဖို့ကြိုးစားနေတဲ့ရဲအရာရှိ (Jung Jae Young) တစ်ယောက်ရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ ခြေရာဖျောက်တော်လွန်းတဲ့လူသတ်သမားကိုဖမ်းဖို့ကြိုးစားပေမဲ့လက်လွတ်ခဲ့ရပါတယ်။လူသတ်သမားကိုလက်လွတ်ပြီး ဖမ်းဆီးလို့မရတော့တဲ့အချိန် နောက်ထပ် ၁၅နှစ်အကြာမှာတော့ I Am the Murderer ဆိုတဲ့ဝတ္ထုစာအုပ်ကိုရေးသားခဲ့တဲ့စာရေးဆရာထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။သူ့ကိုယ်သူစိတ္တဇကွင်းဆက်လူသတ်သမားလို့ဝန်ခံပြီး မီဒီယာတွေကိုအသုံးချကာ စာအုပ်ကိုကြော်ငြာခဲ့ပါတယ်။သူကတော့ Park Si Hoo ပါ။လူသတ်သမားပါလို့ကိုယ်တိုင်ဝန်ခံပြီးတဲ့နောက် ဖမ်းဆီးရမယ့်အချိန်ကာလကျော်သွားပေမဲ့ ထိုလူသတ်သမားကို ဖမ်းမိမှဖြစ်မယ်လို့ကြွေးကြော်ထားတဲ့ရဲအရာရှိတို့ ဘယ်လိုတွေဆက်ဖြစ်ကြမလဲဆိုတာတော့ စိတ်လှုပ်ရှားစရာပါ။
အသတ်ခံရတဲ့မိန်းကလေးရဲ့ မိသားစုဝင်တွေကလည်း လူသတ်သမားကိုလက်စားချေဖို့ကြိုးစားကြပုံတွေ၊ရဲအရာရှိကလည်း ၀န်ခံထားတဲ့လူသတ်သမားကတကယ့်အစစ်လူသတ်သမားမဟုတ်ဘူးလို့မီဒီယာတွေကိုဖွင့်ဟတဲ့အချိန်မှာ ရုပ်သံဌာနတွေက တိုက်ရိုက်စကားရည်လုပွဲတွေလုပ်ဖို့စီစဉ်လာခဲ့ပါတယ်။တကယ်ပဲ Park Si Hoo က လူသတ်သမားအစစ်လား?ရဲအရာရှိပြောသလို လူသတ်သမားအတုလား? အတုဆိုရင် Park Si Hoo ရေးသားတဲ့စာအုပ်ထဲကအသေးစိတ်အကြောင်းအရာတွေက လူသတ်သမားအစစ်ဖြစ်မှန်းသိသာနေတာတွေကရော? တကယ့်လူသတ်သမားအစစ်က ဘယ်သူများဖြစ်မလဲ? ရဲအရာရှိကရော ဘာလို့ဒီလူသတ်သမားကိုသတ်ချင်လောက်အောင်မုန်းပြီး မရမနေဖမ်းဆီးချင်နေရတာလဲ?ဒီလိုရုပ်သံဌာနတွေအပြင်းအထန်စိတ်ဝင်စားနေတဲ့အချိန်၊ပြည်သူလူထုရဲ့အာရုံစိုက်မှုတွေအများဆုံးရနေတဲ့အချိန် လူသတ်သမားအစစ်ကထွက်ပေါ်လာပါ့မလား?ဆိုတာတွေကို ဇာတ်လမ်းအချိတ်အဆက်မိမိနဲ့ စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းစွာကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
Trend ပရိသတျကွီးအတှကျ ဒီတဈခေါကျတော့ ကိုရီးယားဇာတျကားကောငျးလေးတဈကားနဲ့ မိတျဆကျပေးခငျြပါတယျ။ဒီဇာတျကားဟာ၂၀၁၂ ခုနှဈတညျးကထှကျရှိခဲ့တာဖွဈလို့ကွညျ့ဖူးသူတှလေညျးရှိမှာပါ။မကွညျ့ရသေးတဲ့ပရိသတျတှအေတှကျတော့ ဒီဇာတျကားက အခြိနျပေးပွီးကွညျ့ရတာ တနျတဲ့ဇာတျကားလေးပဲလို့ ပွောခငျြပါတယျ။ဇာတျကားလေးနာမညျကတော့ Confession of Murder ပါ။အကျရှငျစိတ်တဇဇာတျလမျးပုံစံဖွဈပွီး ဒါရိုကျတာ Jung Byung-gil ရိုကျကူးထားတာဖွဈပါတယျ။ပါဝငျသရုပျဆောငျထားသူတှကေတော့ မငျးသားခြောတှဖွေဈကွတဲ့
Jung Jae-young နဲ့ Park Si-hoo ပါ။
ဇာတျလမျးအကဉျြးကိုပွောပွရမယျဆိုရငျတော့…မိနျးကလေးတှခေညျြးပဲရကျရကျစကျစကျသတျဖွတျခဲ့တဲ့ စိတ်တဇလူသတျသမားကိုဖမျးဖို့ကွိုးစားနတေဲ့ရဲအရာရှိ (Jung Jae Young) တဈယောကျရှိပါတယျ။ဒါပမေဲ့ ခွရောဖြောကျတျောလှနျးတဲ့လူသတျသမားကိုဖမျးဖို့ကွိုးစားပမေဲ့လကျလှတျခဲ့ရပါတယျ။လူသတျသမားကိုလကျလှတျပွီး ဖမျးဆီးလို့မရတော့တဲ့အခြိနျ နောကျထပျ ၁၅နှဈအကွာမှာတော့ I Am the Murderer ဆိုတဲ့ဝတ်ထုစာအုပျကိုရေးသားခဲ့တဲ့စာရေးဆရာထှကျပျေါလာခဲ့ပါတယျ။သူ့ကိုယျသူစိတ်တဇကှငျးဆကျလူသတျသမားလို့ဝနျခံပွီး မီဒီယာတှကေိုအသုံးခကြာ စာအုပျကိုကွျောငွာခဲ့ပါတယျ။သူကတော့ Park Si Hoo ပါ။လူသတျသမားပါလို့ကိုယျတိုငျဝနျခံပွီးတဲ့နောကျ ဖမျးဆီးရမယျ့အခြိနျကာလကြျောသှားပမေဲ့ ထိုလူသတျသမားကို ဖမျးမိမှဖွဈမယျလို့ကွှေးကွျောထားတဲ့ရဲအရာရှိတို့ ဘယျလိုတှဆေကျဖွဈကွမလဲဆိုတာတော့ စိတျလှုပျရှားစရာပါ။
အသတျခံရတဲ့မိနျးကလေးရဲ့ မိသားစုဝငျတှကေလညျး လူသတျသမားကိုလကျစားခဖြေို့ကွိုးစားကွပုံတှေ၊ရဲအရာရှိကလညျး ဝနျခံထားတဲ့လူသတျသမားကတကယျ့အစဈလူသတျသမားမဟုတျဘူးလို့မီဒီယာတှကေိုဖှငျ့ဟတဲ့အခြိနျမှာ ရုပျသံဌာနတှကေ တိုကျရိုကျစကားရညျလုပှဲတှလေုပျဖို့စီစဉျလာခဲ့ပါတယျ။တကယျပဲ Park Si Hoo က လူသတျသမားအစဈလား?ရဲအရာရှိပွောသလို လူသတျသမားအတုလား? အတုဆိုရငျ Park Si Hoo ရေးသားတဲ့စာအုပျထဲကအသေးစိတျအကွောငျးအရာတှကေ လူသတျသမားအစဈဖွဈမှနျးသိသာနတောတှကေရော? တကယျ့လူသတျသမားအစဈက ဘယျသူမြားဖွဈမလဲ? ရဲအရာရှိကရော ဘာလို့ဒီလူသတျသမားကိုသတျခငျြလောကျအောငျမုနျးပွီး မရမနဖေမျးဆီးခငျြနရေတာလဲ?ဒီလိုရုပျသံဌာနတှအေပွငျးအထနျစိတျဝငျစားနတေဲ့အခြိနျ၊ပွညျသူလူထုရဲ့အာရုံစိုကျမှုတှအေမြားဆုံးရနတေဲ့အခြိနျ လူသတျသမားအစဈကထှကျပျေါလာပါ့မလား?ဆိုတာတှကေို ဇာတျလမျးအခြိတျအဆကျမိမိနဲ့ စိတျဝငျစားဖှယျကောငျးစှာကွညျ့ရမှာဖွဈပါတယျ။